Immisa taageeradood ayaad u baahan tahay inaad hagaajisid muuqaalka boggaaga?
Marka laga eego aragtida odhaahda, geedi socodka jiilka waxay u adeegtaa si ay u dhisaan hyperlinks oo ka yimaada ilaha kale ee websaydhada adiga oo isticmaalaya qaabab kala duwan oo isku xiran sida blog posting, faallooyinka faallooyinka, jaraa'idyada saxaafadda iyo iwm. Dhammaan waxqabadyadani waxay u adeegaan inay siiyaan sumcadaada asturnaanta iyo kor u qaadida sumcadaada ganacsigaaga dhexdeeda. Makiinadaha raadinta ah waxay tixgeliyaan xidhiidhada u tilmaamaya goobtaada sida codadka dhijitaalka ah iyo qaddarka codadka ee aad haysato, goobta aad ka sareeyso waxay ku jiraysaa SERP.
Si kastaba ha noqotee, dhab ahaantii codadka oo dhan ma siman yihiin. Waxaa jira farsamooyin fara badan oo farsamo kuwaas oo u adeegsanaya farsamooyinka raadinta raadinta iyo helitaanka darajo sare oo leh tayada tayada hooseeya. Si kastaba ha ahaatee, wakhtiyada, marka aad si fudud u dhisi karto badan oo tayo-hoose oo tayo leh oo ku saabsan hareerahaaga, waa la tagay. Maalmahan, Google iyo mashiinno kale oo waawayn raadin ayaa si firfircoon uga hortagaya waxqabadyo dhisme khiyaano leh sida beeraha isku xirka, maqaallada la daabacay iyo faalooyinka blogga ee spamka. Dhawaan, Google ayaa sameeyay qaabka cusub ee algorithm iyadoo loo eegayo dhamaanba tayada hoose ee tayada hoose ee loo baahan yahay in laga saaro. Haddii kale, ilware shabakadu waxay noqon kartaa mid gardaro ah Google, ama in la qaado ciqaabo u horseeda darajooyinka darajooyinka. Taasi waa sababta, maalmahan, tayada xidhiidhada soo galaya waa ka qiimo badan yihiin tiradooda. Waxay micnaheedu tahay inaad u baahan tahay inaad hubiso hay'ad iyo ku-tiirsanaanta ilaha soo-galiya adiga.
Marka ay timaado PageRank ee ilahaaga internetka, tan waxaa go'aaminaya darajooyinka xiriirka soo socda ee goobtaada. Waxay micnaheedu tahay in haddii aad ku xiran tahay bogagga shabakada leh PR oo hooseeyo, adiga PageRank-gaaga ma kori doono.
Taasi waa sababta kor u qaadida tayada ee ka jirta website-ka sareeya ee PR ee kharashka ka sarreeya kumanaan ka mid ah kuwa tayada hooseeya. Xiriirinta liisaska hoose ee ay isticmaalaan bixiyeyaasha SEO aan khibrad lahayn, oo ay ka heleen waxqabadyo dhisme khiyaano leh, ma aha oo kaliya si xun u saameynaya website-kaaga SEO, laakiin sidoo kale waxay burburiyaan muuqaalka shirkadda iyo sumcadda.
Daqiiqado qiimo leh oo ka soo jeeda shabakadaha la xidhiidha bogagga shabakada leh ee PageRank waxay ganacsi ka dhigeysaa mid aad u barwanaagsan oo gacan ka geysata makiinadaha raadinta si loo xalliyo waxa goobtaagu ku saabsan yahay.
imisa jeer ayaad u baahan tahay inaad ku sarreeysid Google?
Ma jirto wax dhib ah oo su'aasha ah ee kor loogu qaadi karo su'aashaas maadaama jawaabta ay ku xirantahay ay ku xiran tahay warshadahaaga iyo da'daada. Hal domain wuxuu u baahan yahay dhowr magaalo oo tayo sare leh si uu ugu sarreeyo bogga natiijada raadinta, halka domain kale u baahan yahay xiriirro badan oo soo gudbiya si kor loogu qaado awoodda iyo hagaajinta sharafta. Dabcan, waxaa jira waxyaabo badan oo calaamado ah oo muujinaya natiijada raadinta boggaga internetka.
Maxay yihiin taageerada ugu fiican?
Nooca ugu fiican ee backlinks waa isku xirnaanta dabiiciga ah ee dabiiciga ah. Waxay yimaadaan goobtaada adiga oo aanad weydiisan oo helin markaad filaynin. Xiriiradahan waxaa laga helay barta internetka ee caanka ah ama kuwa caanka ah ama website-yada kuwaas oo si weyn u qiimeeya sheekadaada waxayna go'aansadaan inaad la wadaagto akhristayaashooda. Sida caadiga ah, noocyada noocaas ah waxaa laga helaa ilaha internetka ee khuseeya, waxaanay keenaan gaadiidka badan ee isku xiran.
Si kastaba ha noqotee, waa adag tahay in la helo xiriirada baayoolajiyooyinka laga helo boggaga la isku halleyn karo ee ku yaal suuqaaga. Ilahaaga shabakada waa in ay lahaadaan qiimo badan oo loogu talagalay dadka isticmaala oo leh sumcad sare si ay u helaan fursad ay ku helaan xiriirada soo socda ee hogaamiyaasha warshadaha Source .